ColourPie: Inesimba Chishandiso cheVara Fans | Linux Vakapindwa muropa
RuvaraPie chishandiso chehunyanzvi icho iwe chaunowana mune zvekuchengetedza uye mashopu ezvimwe zvekugovera. Ichi chishandiso hachizivikanwe kune vazhinji vashandisi, asi chinogona kuve chinonakidza kwazvo kune avo vanoda rumwe rubatsiro nerumwe ruvara.
Chinangwa chayo kuita sechishandiso che kutsanangurwa kwemavara, nekudaro zvichibatsira kugadzirwa kwevagadziri uye vanogadzira vanofanirwa kushanda nemavara uye makodhi avo. Iwe unogona kutora ruvara kubva kuchirongwa pachako, kana kubva chero chinhanho pachiratidziri, nokudaro uchiwana mafomati ese.
Iyo zvakare inokutendera iwe kuti uchengete mavara iwe aunosarudza kana kusarudza, gadzira uye gadziridza mavara uchishandisa ayo mavara picker, tsigiro yezhinji mafomu, iine anosvika gumi nematanhatu mafomati ayo anogona zvakare kushandurwa pakati. Semuenzaniso, mafomati anotevera anowanikwa kwauri:
GreyScale kana grayscale
Naizvozvi, unogona kusarudza chero ruvara rwaunoda uye urwo rwaunoda kushanda, kungave nekuti uri dhizaini, kana mugadziri, Uye uve neyese data yemisanganiswa nemakodhi. Semuenzaniso, kana iwe uri webhu dhizaini kana iwe uine blog, zvirokwazvo iwe wakazviwana iwe uri mumamiriro ezvinhu umo iwe unofanirwa kuziva iyo HTML kodhi yemavara iwe yauri kuzoisa kumashure kwewebhu, mune zvinyorwa , nezvimwe.
Nechirongwa ichi, zvese izvo zvichagadziriswa, sezvo uine mudziyo wekutora iyo kodhi ipapo ipapo, pamusoro pekuziva chaizvo kusanganiswa kwemavara zvakafanira kupa iro rinokonzeresa ruvara, kana kuita diki diki kuti uwane toni yaunoda, nezvimwe.
Dzimwe nguva, iyo hombe nhamba yekushandisa inowanikwa yakakura kwazvo, zvekuti zvishandiso zvaunazvo kuti uzviite hazvigare zvichizivikanwa. zuva rako zuva rava nyore. Ndinovimba kuti nezvinyorwa izvi kuratidza mafomu matsva akakanganikwa mune mamwe mablog zvinokubatsira ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » ColourPie: chishandiso chine simba chevateveri vemuvara
LXQt 0.17.0 yasvika nekuvandudzwa kwepaneru uye nedzimwe shanduko
Xen 4.15 inosvika iine live yekutsigira rutsigiro, ARM zvinowedzera uye nezvimwe